Tag: Influence 2.0: Ny ho avin'ny marketing influencer | Martech Zone
Tag: Influence 2.0: Ny ho avin'ny marketing influencer
Alakamisy Janoary 26, 2017 Alatsinainy Janoary 18, 2021 Jordan Feise
Ny mpanjifanao dia mihalalina, mahazo hery, mitaky, mahay manavaka ary mora tohina. Ny paikady sy ny metrika taloha dia tsy mifanaraka intsony amin'ny fomba fandraisan'ny olona fanapahan-kevitra amin'ny tontolo nomerika sy mifandray ankehitriny. Amin'ny fampiharana teknolojia ireo mpivarotra dia afaka miantra amin'ny fomba lehibe amin'ny fomba fijerin'ny marika ny dian'ny mpanjifa. Raha ny marina, 34% ny fanovana dizitaly dia tarihin'ny CMO raha ampitahaina amin'ny 19% ihany no notarihin'ny CTO sy CIO. Ho an'ny mpivarotra dia tonga ity fiovana ity a